Isifinyezo se-SPC Floor formula - Isazi seZD Floor
Ikhaya>Isifinyezo se-SPC Floor formula
Hlela: UDenny　2020-06-05
Ukwakhiwa kwesakhiwo se-PVC
I-PVC resin powder, itshe powder, i-plasticizer, i-stabilizer, i-carbon black, izakhi eziyinhloko i-polyvinyl chloride ne-miyala yamatshe.
Isitezi sepulasitiki sakhiwa iphepha lokuhlobisa lefilimu elingaphansi kwesiqalo sePVC, ungqimba olungahambisani nokuhlanganiswa kwe-UV dile ngokuhlelekile ukusuka phansi kuya phezulu.
I-Stone plastic floor SPC uhlobo olusha lokuvikela imvelo lakhiwa ngokususelwa kubuchwepheshe obuphezulu. Inezimpawu ze-zero formaldehyde, ubufakazi be -hutha, ubufakazi bomswakama, ubufakazi bomlilo, ubufakazi bokunambuzane nokufakwa okulula.
I-SPC floor is extruder ehlanganiswe ne-T-shape die to extrate sub Pateate, isebenzisa ama-roller amathathu noma ama-roller calender ukufaka ngokwahlukana ungqimba olungavali i-PVC, ifilimu yombala we-PVC kanye ne-PVC substrate, kanye nokushisa nokubekelwa phansi ngesikhathi esisodwa , Inqubo ilula, kufanelekile kwenziwa ukushisa, futhi akukho glue edingekayo.
Izinto zokwakha phansi ze-SPC zisebenzisa amafomula anobungani bemvelo futhi aziqukethe izinto ezinobungozi ezinjengezinsimbi ezisindayo, i-phthalates, ne-methanol. Idume kakhulu emazweni athuthukile eYurophu naseMelika kanye nasemakethe yase-Asia-Pacific. Ngokuqina kwayo okuqinile nokuqina, ukubeka phansi kwamatshe-ipulasitiki akugcini ngokuxazulula inkinga yomswakama kanye nokuguqulwa kwesisekelo sokhuni oluqinile, kodwa futhi kuxazulula inkinga ye-formaldehyde yezinye izinto zokuhlobisa.
Kunamaphethini amaningi ongakhetha kuwo, afanele umhlobiso wangaphakathi, amahhotela, izibhedlela, izitolo ezinkulu zezitolo nezinye izindawo zomphakathi
I-shrinkage ye-SPC floor: ≤1 after (emva kokulashwa okuningana), ≤2.5 ‰ (ngaphambi kokuthola ukwelashwa), (izinga lokuhlola i-shrinkage: 80 ℃, ejwayelekile yamahora ayi-6);
Ubuningi be-SPC floor: 1.9 ~ 2 amathani / i-cubic metres;
Izinzuzo zephansi le-SPC: Izinkomba ezingokomzimba zephansi le-SPC zizinzile futhi zithembekile, futhi izinkomba zamakhemikhali zihambisana namazinga omhlaba kanye nawezwe lonke;
Ubunzima besisekelo se-SPC: phansi kwe-SPC kunobunzima obukhulu, isisindo esindayo nezindleko eziphezulu zokuhamba;
Uma kuqhathaniswa nokukhiqizwa kwephansi kwe-LVT ne-WPC, ukukhiqizwa kwesakhiwo se-SPC: Ukulungiswa kwephasi le-SPC kanye nenqubo yokukhiqiza kulula.
Inqubo yokukhiqiza phansi ye-SPC
Inqubo: 1. Ukuxuba
I-metering ezenzakalelayo ngokusho kwesilinganiso sezinto zokuhlanza → Ukuxuba okushisayo ne-ngesivinini esikhulu (Ukushisa okuxubayo okushisa: 125 ° C, umsebenzi ukuhlanganisa zonke izinhlobo zezinto ngendlela efanayo ukuze kuqedwe umswakama ezintweni ezisetshenziswayo) Ukushisa okuhlanganayo: 55 ° C.) → Hlanganisa izinsimbi zomfaniswano ngokupholisa;
Inqubo 2: Extrusion
Joyina i-extruder yamawele wokufudumeza nokufaka okungaphezulu → faka iphepha lokufa le-sheet for extrusion wokubumba, ishidi elibunjiwe lidlula kukhala olune-roll emine, bese okusetshenziswayo kusethwe ekuqineni → unamathisele umbala wefilimu → unamathisele ungqimba → ukupholisa → ukusika;
Inqubo 3: Ukulawulwa kwe-UV
Ingaphezulu le-UV → isisekelo (ukufudumeza okushisa kwamanzi okushisa: 80 ~ 120 ℃; izinga lokushisa lamanzi abandayo: 10 ℃)
Inqubo 4: ukushona nokubhoboza + ukufakwa
Ukushaya ngezinyawo → ukubeka phansi, ukunqunqa, ukuhluza → ukuhlola → ukufakwa
Ukuhlaziywa kwezinkinga ezijwayelekile-ukubumbana komkhiqizo ompofu
1. Ubungako bomkhiqizo abuqinile, isikhunta asigcwele, nobukhulu bodonga abulingani.
Izizathu: Ukugcotshwa okungenakufinyeleleka kwangaphakathi nangaphandle kwefomula, isivinini sokondleka esingazinzile, ukugqwala okuqinile kwesigaxa somgoqo, nokuvunyelwa okungafanele;
Isixazululo: Thuthukisa isilinganiso se-ejenti yangaphakathi nangaphandle ye-slip agent, ukwahluleka kokulondeka okulungile, buyisela umgoqo nesikulufa, bese ulungisa igebe phakathi kwesigaxa nesikulufa.
2. Ukubonakala komkhiqizo akuhambelani, kuqubuka umbala kusobala, kanti izikali zezinhlanzi ezingajwayelekile ziyavela ngaphezulu; ukusebenza komkhiqizo akunampilo; ubunzima buphansi, umkhiqizo awubumbekile futhi nokumelana nomthelela akumfanele;
Isizathu: Ukwakheka kwefomula akunangqondo, ukugcwaliswa kwe -organic kuphezulu kakhulu, i-plasticization ayinampilo, futhi inani lezinto ezibonakalayo elinomthelela alanele;
Isixazululo: Shintsha isakhiwo sefomula, unciphise ngokufanele okuqukethwe okungama-filamorganorganic, lungisa ukufakwa kweplastiki kokuqukethwe kube cishe ama-65%, futhi wandise izinto zokuphikisa umthelela njengoba kufanele.
3. Ukukhishwa komkhiqizo oseqediwe kugobile, kukhubazekile, nokuzitholela okuyingxenye;
Imbangela: Inhloko yomshini nokufa okushintshashintshayo akukho endizeni efanayo, ijubane le-extrusion lishesha kakhulu, izinga lokushisa lamanzi abandayo liphezulu kakhulu, umfutho wamanzi mncane kakhulu, ukuhamba kwamanzi akwanele, indlela yamanzi negesi ayibushelelezi, futhi ingcindezi engemihle ye-vacuum ayanele;
Isixazululo: Qondisa ikhanda life futhi ukugoba kufe ngezinga elifanayo, sinciphise ijubane le-extrusion & ukupholisa lokushisa lamanzi, khuphula umfutho wamanzi nokugeleza, lungisa ingcindezi engemihle yokuhlola indlela yamanzi kanye nendlela yomoya ayivelwanga. Ukuhlaziywa kwezinkinga ezijwayelekile-ukubumbana komkhiqizo ompofu
Isixazululo: Qondisa ikhanda life futhi ukugoba kufe ngezinga elifanayo, sinciphise ijubane le-extrusion & ukupholisa lokushisa lamanzi, khuphula umfutho wamanzi nokugeleza, lungisa ingcindezi engemihle yokuhlola indlela yamanzi kanye nendlela yomoya ayivelwanga.
Isifinyezo se-SPC Floor formula Okuqukethwe okuhlobene